Kaankarada Mindhicirrada iyo qorshe lagula dagaaleyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaankarada Mindhicirrada iyo qorshe lagula dagaaleyo
La daabacay onsdag 24 oktober 2007 kl 15.15
Howshani waxey ku wajahan tahey bulshada qeybteeda uu inta badan ku dhaco cudurka Cancer-ka ee gala xiidmaha iyo mindhicirrada.
Midda keliya ee lagu xireyana tahey inuu ka diiwaan gashan yahey amaba deggen yahey gobolka Istockholm. Ereyadaasi waxaa sheegey dhakhtar ku takhasusey burooyinka aan wanaagsaneyn ee Cancerka, galana mindhicirrada ee Sven Törnberg.
Laga bilaabo dhammaadka sannadka 2007, horraanta 2008-da, waxey heayd goboleedka Istockholm ee Landstinget ku casumi doontaa dhammaan waayeelka da’doodu u dhaxeyso 60 illaa iyo 69 ee caafimaadka qaba baaritaan la xiriira cudurka cancerka ee ku dhaca xiidmaha.
Cudurka cancerka ee xiidmaha iyo mindhicirrada ayaa ah kan ugu badan ee ku dhaca ragga iyo dumarkaba.
Sannadkii waxaa u bukooda cudurka noocaasiya dadyoow tiradoodu gaareyso 5 600, halka ey 2 500 ka mid ahina u geeriyoodaan.
Baaritaanka laga bilaabi doono gobolka Istockholm ayaa ah mid lagu casumi doono waayeelka ku dhaqan nawaaxigaa balse aan noqon doonin qasab, ciddii aan dooneyn, sida uu sheegey Sven Törnberg, oo ah dhakhtar ku takhasusey cudurrada burooyinka ee cancerka, ahna madaxa maamulka qorshana ee heyad goboleedka Istockholm ku baareyso waayeelka si looga hortago cudurka cancerka ee ku dhaca mindhicirrada.
- Macnaha ka dambeeya ayaa ah sidii horey loogu ogaan lahaa cidda cudurka qabta inta aannu ku ballaaran. Islamarkaana looga badbaadiyo loona yareeyo dadyoowga u geeriyooda cudurka cancerka ee gala mindhicirrada.
Wixii ka horreeyey muddo labaatan sannadood gaareysa, waxaa dadyoowga uu cudurka noocaasiya ku dhaco lagu daweyn jirey iyada oo mindhicirrada laga saaro, halkaasina loogu bedelo bac caloosha ku rakiban oo saxarradu ku dhacdo, laguna magacaabo Astomi, hase yeeshee wixii muddadaa ka dambeeysey oo ey sare u kacdey aqoonta cudurka cancerka ee gala mindhicirrada, waxaa kordhey dadyoowga ka badbaada ama laga daweeyo, waxaana 50% hoos u dhacdey cidda isticmaasha bacaha noocaasiya.
Gobolka Istockholm waa gobolkii ugu horreeyey ee baartitaan noocaasiya ku dhaqaaqa. Hase yeeshee sida uu sheegey Sven Törnberg, in ey jiraan waddammo amuurtaa kaga horreeyey, sida dalka Finland oo isagu bilaabey saddex sannadood horteed.
- Dalka Ingiriiska oo ah dalka howsha ugu ballaaran middaa ka haya ayaa sannad hortii amuurtaa bilaabey.
Sidoo kale waxaa jirar waddammo sida iswiidhenba aan dalka dhammaantii ka bilaabin ee goobo ka mid ah ka hirgeliyey sida magaalada Amesterdam ee dalka Holand iyo Talyaaniga oo ka bilaabey hoowlo noocaasiya goobo ka mid ah.
Baaritaanka waayelka ee horaanta sannadka foodda innagu soo haya lagu casumi doono in laga baaro cudurka Cancerka ee mindhicirrada, eyna sannadkii u geeriyoodaan dad tiradoodu gaareyso 2 500, ayaan aheyn mid wax kharash ah ey uga bixi doonto dadyoowgaa. Midda keliya ee looga baahan yaheyna tahey iney ka qeyb qaataan kolka kaltankoodu yimaado. Iyadoona labadii sannadoodba mar lala soo xiriiri doono.
Siduu haddaba u dhici doonaa baaritaanka noocaniya. Sven Törnberg iyo mar kaleto.
- Baaritaankani maaha marka hore mid aad dhakhtar kula kulmeyso. Waxaa boostada laguugu soo diri saddex qafis ee waraaqo ka sameysan, kuwaasina oo aad marineyso mid walba ee ka mid ah saxaro aan sidaa u badneyn, halkaasina oo aad ku direyso boostada una direyso shey-baar si baaritaan loogu sameeyo.
Wixii faahfaahin ahna waxey la socdaan waraaqaha laguu soo diro.
- In la sameeyo tijaabadaa waa mid loo baahan yahey muhiimaddeeda in la ogaado.
Haddii uu ruuxu qabo cudurka Cancerka ee xiidmaha ee bilow ah waxaa markiiba lagu ogaanayaa tijaabadaa. Taasina oo sahleysa in laga daweeyo. Sida uu sheegey dhakhtar Sven Törnberg.
Mar haddii uu shey-baarku jawaab ka soo bixiyo, waxaa markiiba lala xiriireyaa cid alla ciddii saxarradooda laga heley dhibco dhiig ah ee aan indhuhu qaban kareyn, taasina oo sahleysa in wax laga qabto inta aannu cudurka dhibaataddiisu faafin.
- Haddii middaasina dhacdana dhakhtar ayaa markiiba la soo xiriiri doona, si loo daweeyo shakhsiga. Middaasina oo qaadaneysa muddo laba toddobaad gudaheed.
Waraaqaha baaritaanka, waxaa sidoo kaleeto la socda warbixin ey ku qoran yihiin telefoon lambar aad kala xiriiri karto haddii wax ey mugdi kaga jiraan. Halkaasina oo aad ka heleyso cid luuqaddaada hooyo ku hadasha, haddii aadan awoodin in aad iswiidhish ku wareysato ama aadan heysan cid kuu faahfaahisa.